Saraakiil Tigree ah oo odayaasha iyo dadka deegaanka Aabaaley oo u dhaw deegaanka Feerfeer u jeediyay hanjabaad ku saabsan Shabaabul Mujaahidiin. | Halganka Online
Saraakiil Tigree ah oo odayaasha iyo dadka deegaanka Aabaaley oo u dhaw deegaanka Feerfeer u jeediyay hanjabaad ku saabsan Shabaabul Mujaahidiin.
Wararka ka imaanaya deegaanka Feerfeer ayaa sheegaya in shalay Saraakiil Tigree ah ay gaareen deegaanka lagu magacaabo Aabaaley oo u dhaw Xadka Hiiraan iyo Itoobiya halkaasi oo odayaasha deegaanka iyo waxgaradka ay hanjabaadyo ugu jeediyeen iyagoona go’aanno duldhigay.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in Saraakiisha Tigreeda ay ku wargeliyeen odayaasha deegaankaasi in haddii deegaankooda ay so galeen xubno kamid ah Al-shabaab ay deegaanka dhan gubi doonaan, isla markaana ay dili doonaan dadka masuulka ka ah deegaankaasi.
Saraakiisha Tigreega ayaa ku dooday in ay ka warhayaan waxa ay ugu yeereen dad qarbudaad doonaya in ay ka sameeyaan gudaha Itoobiya oo xuduudka Itoobiya ee Somaliya dhinac waliba laga soo galinayo kuwaasi oo katirsan Shabaabul Mujaahidiin waa sida ay sheegeen saraakiisha Tigreeda.
Isla shalay ayaa Ciidamo fara badan oo Tigree ah oo maalmahan dhaq dhaqaaq ka waday Feefeer waxay Kalabeyrka keeneen Maleeshiyadii ka hartay nidaamki DKMG ah ee laga eryay Hiiraan kuwaasi oo loo igmaday gaadiidka halkaasi maraya in ay baaritaano ku sameeyaan.
Odayaasha dhaqanka Aaabaaley ayaan wali wax hadal ah laga heyn laakin Ciidamaada Tigreeda ayaa dhamaan sidaasi kula dhaqma dadka deegaanada xuduudkooda ku dhaw, waxaana la duldhigay odayaasha go’aanno ay kamid ahaayeen in aysan tuuladaasi soo galin dhalinyaro aan laga warheyn isla markaana wixi dhaq dhaqaaq ah ee jira ay kusoo wargeliyaan Itoobiyaanka.
Saraakisha Tigreeda ayaa sidaasi oo kale kula dhaqma odayaasha degmada Balan Balle ee xadka Galgaguud uu la wadaago Itoobiya, waxaana marar badan xittaa ay deegaanadaasi si qasab ah kaga qoreen maleeshiyo Somali ah oo ay ka dagaal galiyeen meelaha ay joogaan Qubuura Galeenka gobollada dhexe.
« 2 Duyuurad Helicopter ah oo deegaanka Baraxley ee Gaalgacyo ka dajisay Saraakiil Mareykan ah oo kormeeraya dagaallada gobollada Dhexe. 266 neef oo xoolo ah oo maanta loo qeybiyay Masaakiinta degmada Owdhiigle ee taabacsan Wilaayada Islaamiga ah ee Sh/Hoose. »